CNC agbanye Center, CNC lathe igwe, Supplier & Manufacturers China
Ị nọ ebe a: Ulo1 / CNC agbanye Center, CNC lathe Machine, Supplier & Manufacturers C ...
AKW PRKWỌ KWES MR M MULTI AXIS CNC Turning Centre
Tsinfa bụ ọkachamara soplaya & emeputa nke CNC mbịne igwe na China. Oghere ntụgharị CNC nwere ọrụ zuru oke, mma mma igwe, na oke ọsọ. Tumadi eji maka nhazi rotary akụkụ, n'ozuzu nwere ike na-akpaghị aka mezue cylindrical elu, conical elu, * Tụkwasị na elu, mkpọpu ala, -egwe ọka uzo, na eri nhazi, nwekwara ike hazie ụfọdụ mgbagwoju rotary elu, dị ka hyperboloid. Enwere ike ịgbakwunye ọtụtụ axis dịka ọchịchọ ahụ si dị: c axis lathe, 3 axis lathe, 2 axis lathe, 5 axis CNC lathe, 4 axis CNC lathe.
Akwa arụmọrụNa CNC tụgharịa center, mgbe workpiece clamped otu ugboro, ọ nwere ike mezue tụgharịa akụkụ, -egwe ọka, mkpọpu ala, mgbabere uzo, eri nhazi, na ndị ọzọ na nhazi usoro.
Ike isiike: A na-edozi akwa ahụ n'ụzọ pụrụ iche iji wepụ nrụgide dị n'ime.
Ezi nkenke: CNC lathe na-eji ngwa ngwa ngwa iji chọpụta mmegharị nri site na bọlbụ na-agbanye mpempe akwụkwọ na izu ike ngwá ọrụ, ya mere, usoro ihe oriri na-eme ka ọ dị mfe.
Mme mbụme? ma ọ bụ chọọ ọnụahịa?Nye anyị oku na + 86-15318444939, ma gwa otu onye ọkachamara ọkachamara anyị okwu.I nwekwara ike dejupụta anyị: ụdị ịkpọtụrụ.
CNC kwụ igwe ntụgharị maka ire:
TFA40 CNC mbịne igwe
Rotary dayameta 400mm, 30/45 ogo tilt bed, adaba mgbawa mwepụ, ike rigidity
TFA40-S CNC mbịne center 3 axis
8 ọdụ cutter elu, -egwe ọka, mkpọpu ala, mbịne, nwere ike esichara, CNC mmemme
TFA40B slant bed CNC lathe 2 axis
Ntughari rotary bụ 400mm, ogologo nhazi bụ 500-1000mm, a ga-eji igwe mwepụ mgbawa maka mwepụ mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka.
TFA-8S CNC mbịne center 4 axis
8 ọdụ tụgharịa ngwá ọrụ ụlọ elu, Anọ 90 Angle ike isi, Anọ 0 n'akuku isi isi
TFA50 CNC agbanye center
LTK usoro ewepụghị bed CNC lathe igwe
ọnụ ala price, dayameta 360-16000mm, machining ogologo 500-5000mm,
CNC mbịne igwe video:
Anyị nwere ike ịhazi dịka mkpa gị, kpọtụrụ anyị maka azịza na nkwupụta
Uru nke CNC ntụgharị igwe:
Ọkwa dị elu nke akpaaka: Usoro CNC maka njikwa, dịka teknụzụ nhazi maka mmemme, ọtụtụ usoro mechara na otu oge. Enwere ike ịnwe ya na hydraulic chuck, oche ọdụ ụgbọ mmiri na ogwe aka robot maka akpaka na ibudata nhazi, nke na-azọpụta ọrụ dị ukwuu ma melite arụmọrụ mmepụta.
Mfe mgbawa mwepụ: ịnara tilt bed, ígwè mgbawa ndammana ịdaba mgbawa collection igbe, nwere ike rụrụ site na yinye mgbaaka ebu mwepụ mwepụ.
Ezi nchekwa: a na-anabata nchebe zuru oke.
Oke ọsọ: Spindle gosiri ọsọ dị site na 1600 ruo 4500 Rpm
Gini bu CNC cnc?
Otutu echekwa CNC lathes nwere uzo abuo, X na Z. Ntughari etiti nwere otutu uzo, uzo 3, 4 axes, 5 anyu, na ndi ozo. Na mgbakwunye na ọrụ nke ịtụgharị ma na-egwe ọka, ọ nwere ọrụ nke arụmọrụ dị elu. Oge nkwụsị na oge belatara.
Iji chịkọta onwe gị, ụlọ ọrụ CNC nwere àgwà ndị a:
(1) Mgbanwe siri ike, nke kwesịrị ekwesị maka nhazi ọtụtụ akụkụ na obere ogbe.
Na ọdịnala akpaka ma ọ bụ ọkara akpaka na-arụ ọrụ akụkụ ọhụrụ, ọ dị mkpa ka ịhazie akụrụngwa igwe ma ọ bụ ngwa ngwa igwe, iji mee ka ọ dị mfe iji.
Akụrụngwa akụrụngwa na-agbanwe maka ihe ndị chọrọ nhazi, ma mgbe ị na-eji CNC lathe iji hazie akụkụ nke ụdị dị iche iche, ọ dị mkpa iji nyochagharịa ma ọ bụ gbanwee usoro nhazi ahụ.
Ihe omume (software) nwere ike ngwa ngwa izute nhazi chọrọ na-ebelata oge ọrụ nhazi maka dochie akụrụngwa igwe
Adabara multi-dịgasị iche iche, otu ibe, ma ọ bụ obere-ogbe nhazi.
(2) Nzuzo dị elu na ezi nhazi
N'ihi ijikọta nke teknụzụ dị elu na nke ọhụrụ dịka igwe na ọkụ eletrik, nkenke ịkpụzi akụrụngwa nke akụrụngwa CNC dịkarịsịrị elu karịa nke akụrụngwa igwe nkịtị. Mmepe nke ngwa igwe CNC.
A na-ejikwa kọmputa arụ ọrụ nke igwe ahụ dị ka usoro ntinye tupu, nke na-ezere ọkwa ọkwa nke onye ọrụ ahụ.
Ihe dị iche na ogo ngwaahịa nke esemokwu dị iche iche kpatara. Maka ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya, ọ ga-esiri ndị ọrụ igwe nkịtị ike ịmecha ha.
Mana akụrụngwa igwe CNC naanị na-agbakọta mmemme dị mgbagwoju anya ka enwere ike mezuo ebumnuche ahụ, mgbe ọ dịkwa mkpa iji kọmputa ma ọ bụ kọmputa wee gbakọọ.
Nhazi kọmputa. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ọrụ nke igwe ọrụ CNC adịghị emetụta mgbanwe anụ ahụ na nke mmetụta nke onye ọrụ.
(3) Ọ nwere arụpụtaghị ihe dị elu na ọnụahịa nhazi dị ala
Ngwaọrụ nke akụrụngwa igwe na-ezo aka n'oge dị mkpa iji hazie otu akụkụ, gụnyere oge ịmegharị na oge inyeaka. nọmba
Enwere ike ịchịkwa ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ nke lathe n'ọtụtụ dịgasị iche iche, a ga-anabatakwa usoro ịgba ọsọ ọsọ. Enwere ike ịhọrọ ọsọ kacha mma n'oge akụrụngwa.
Iji bulie oke ọkụ ọkụ, arụpụta ọrụ kawanye mma,
Ihe nhazi a belatara, ọkachasị maka akụkụ nke imepụta ihe buru ibu, nnukwu ogbe ahụ, obere ụgwọ ọrụ ahụ.
Maka imepụta oke igwe, ọkachasị imepụta ihe, imepụta ihe na arụmọrụ kwesịrị ịmalite na ịhazi ogo nhazi
Ọnọdụ nke usoro a, teknụzụ nhazi ya na otu obere ogbe ahụ dị iche. Dịka ọmụmaatụ, nhọta nhọta, usoro ụzọ ngwá ọrụ, na nhazi ngwaọrụ
Ekwesịrị iji nlezianya tụlee ọnọdụ na usoro ojiji, a ga-ewebata ọdịnaya ndị dị mkpa na ngalaba na-esote.
Ihe na-abụghị imepụta ihe bụ otu ihe. Ihe kachasị mkpa nke imepụta otu ihe bụ iji hụ na ọnụọgụ nke mbụ, ọkachasị njiri.
Akụkụ nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya na oke nkenke chọrọ. Nke abuo, ma e jiri ya tụnyere ihe ịga nke ọma nke mmepụta otu iberibe. Single-mpempe mmepụta
Usoro NC eji dị iche na imepụta igwe na akụkụ nke ụzọ ngwaọrụ, nhazi ngwaọrụ, yana ọnọdụ mgbanwe mgbanwe ngwaọrụ. Na ogbe mmepụta
Tụnyere mmepụta, otu-ibe mmepụta kwesịrị izere kwa ogologo mmepụta nkwadebe oge.
Gịnị bụ ụdị nke na-atụgharị center?
Ebe ntụgharị na-ezo aka na mgbakwunye nke ọtụtụ oghere na lathe CNC, nke mere na lathe abụghị naanị na ọrụ ntụgharị kama ọ nwekwara ọrụ igwe. 3 axis mbịne igwe, 4 axis, 5 axis.
Dika akuku ihe edeturu akwa, enwere ike kewaa ya na ebe igbutu ala di larịị ma na-echekwa ebe a na-acho bed.
Dịka ọnọdụ nke spindle ahụ, enwere ike kewaa ya na etiti ntụgharị ihu na ntụgharị ihu.
Dika uzo di iche iche di iche iche na ogologo oru, enwere ike kewaa ya n'ime ulo ntughari di ike na etiti ntughari.
Kedu nke bụ nchekwa zuru oke na ntụgharị CNC?
N'ime usoro ịgbanwu na etiti CNC, isi ihe nchekwa bụ ndị a:
1.Mgbe spindle na-agbagharị na nnukwu ọsọ, mmiri na-egbutu mmiri ga-agbapụta na workpiece na-agbagharị.
2 Akwa-agba n'usoro workpiece, e nwere ihe ize ndụ nke jụrụ
3. Ihe egwu ujo eletrik kpatara nchapu ike
4. Mmehie mmemme, na-ebute ihe ize ndụ nke ijikọta ngwá ọrụ.
N'ihi ihe egwu ndị a dị n'elu, achọrọ ka ndị ọrụ soro ntuziaka nchekwa maka ọrụ
1. Mechie ọnụ ụzọ nchekwa oge ị na-arụ ọrụ iji gbochie ịkpụ mmiri si na-agbapụta
2. Mgbe ị na-eji ntukwasi obi chịrị, jide n'aka na ịlele na mkpọchi Chuck mgbe clamping na workpiece. N'otu oge ahụ, mechie ọnụ ụzọ nchedo, ma ghara iguzo kpọmkwem na mpempe akwụkwọ ahụ.
3. Eji ọkụ eletrik eme ihe n'ụzọ ziri ezi na ịtọ ntọala. Rụzie akụrụngwa na-enweghị ọkụ eletrik.
4 lelee usoro iji hụ na ọ dị mma tupu nhazi.
Gịnị na ngwaahịa na-mere si CNC-egwe ọka ma na-atụgharị igwe?
- Ngwaahịa na-mere si CNC igwe
Akụkụ igbe, akụkụ dị mgbagwoju anya
Dị ka ụdị nile nke impeller, ifufe ndu wheel, * Tụkwasị n'elu, nile di iche iche nke elu-akpụzi ebu, propela na mmiri n'okpuru osimiri ụgbọala propela, na ụfọdụ ndị ọzọ na ụdị nke free-ụdị elu, ndị dị otú ahụ akụkụ nwere ike esichara site machining center. Ihe ntanye ihe, ntanye ogwu, ihe nkedo roba, ihe na-eme ka agụụ kpoo ọkụ, friji na-akpụzi ụfụfụ, nkedo nkedo ebu, nkenke nkedo ebu, na ihe ndị ọzọ
- Ngwaahịa na-mere si mbịne igwe
CNC lathe nwere ike ịhazi ọtụtụ ngwaahịa, ọ na-esiri ike depụta otu otu. Na mpempe, CNC lathe tumadi Filiks mbịne akụkụ, dị ka aro, aka uwe, diski, wdg
Gịnị CNC igwe na-eji maka mbịne akụkụ?
Agbanye bụ ụdị igwe eji arụ ọrụ nke ihe eji arụ ọrụ na-agbagharị na moto na-eme ka onye na-ejide ngwa ọrụ wee na-ebufe ngwa ọrụ. E nwere ọtụtụ ụdị nke lathe nke nwere ike mepụta ụdị ụdị ọrụ a:
CNC kwụ lathe igwe, CNC vetikal lathe igwe, CNC ntụgharị lathe igwe.
Olee ụdị workpiece bụ CNC lathe kwesịrị ekwesị maka nhazi?
1. volgbagharị akụkụ na contour dị mgbagwoju anya ma ọ bụ sie ike ịchịkwa nha
N'ihi na CNC tụgharịa center nwere linear na okirikiri interpolation ọrụ, na ụfọdụ CNC atụgharị center nwere ụfọdụ ndị na-abụghị okirikiri interpolation ọrụ.
Site na ọrụ nke ntụgharị ntụgharị, ọ nwere ike gbanwee akụkụ ndị na-agagharị agagharị nke akụkụ ụgbọelu ọ bụla, gụnyere akụkụ ahụ site na ngụkọta oge.
2. Akụkụ dị oke nkenke
Ihe ziri ezi chọrọ nke akụkụ na-ezo aka na nzi ezi chọrọ nke nha, ọdịdị, ọnọdụ, na elu, otu nke nke ziri ezi na-atụkarị aka
ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, akụkụ nke ziri ezi dị elu, akụkụ cylindrical nwere nnukwu ihe a chọrọ;
Akụkụ conone nwere ihe ndị dị elu maka ịgbatị, gburugburu na nchepụta nke ahịrị; akụkụ nwere nnukwu ihe achọrọ maka profaịlụ akara (ọdịdị ngwe ọma)
On pụrụ iche nkenke CNC lathe, nkenke nke geometric ngwe nwekwara ike-machined nnọọ elu.
3. Nhazi nke obi tara mmiri workpiece
Na nhazi nnukwu ebu, enwere ọtụtụ akụkụ nwere nnukwu nha na ọdịdị mgbagwoju anya. Mgbanwe nke akụkụ ndị a mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ dị obere.
O siri ike igweri akụkụ ndị obi tara mmiri n'ihi nnukwu ha,
Dochie egweri na mbịne ka mma nhazi arụmọrụ.
4.Working na usoro mgbagwoju anya
Na workpiece kwesịrị atụgharị ná mpụta gburugburu, ọgwụgwụ ihu, -egwe ọka uzo n'akụkụ, mkpọpu ala. Kinddị ụdị ọrụ a chọrọ ngwaọrụ igwe atọ maka nhazi, lathes, igwe igwe, igwe na-egwu ala, itinye na ibudata ihe dị oke nsogbu, ịnwere ike ịzụta ebe ntụgharị maka nhazi.
CNC mbịne igwe akụkụ
A na-akpọ ngwaọrụ eji ejide ihe eji arụ ọrụ na lathe a lathe eletrik.
Lathe fixtures nwere ike ikewa n’ozuzu fixtures na pụrụ iche fixtures abụọ edemede.
Ngwakọta zuru ụwa ọnụ na-ezo aka na otu ihe ahụ nwere ike ijikọ abụọ ma ọ bụ karịa ụdị ọrụ abụọ, dịka ọmụmaatụ, mkpịsị atọ nke agba, nkụji agba anọ, mpempe mmiri, na mandrel zuru ụwa ọnụ na lathe.
Ihe ndozi pụrụ iche bụ ihe eji arụ ọrụ pụrụ iche maka ịhazi ihe eji arụ ọrụ akọwapụtara otu usoro.
Ọ bụrụ na e kewaa dịka njirimara njikọta nke ngwakọta ngwongwo, enwere ihe ndozi nke na-enweghị ike ịkọtaghachi ya na ihe ndozi nwere ike ịmaliteghachi, a na-akpọ nke ikpeazụ a modular.
Ihe ndozi nwere àgwà a pụrụ ịdabere na ya nwere ike ịkwado ogo ngwaahịa ahụ, melite arụmọrụ nhazi ma gbasaa akụrụngwa nke akụrụngwa igwe.
Na lathe ọrụ, ọtụtụ n'ime ojiji nke workpiece ma ọ bụ oghere cylindrical n'ọnọdu.
Atọ-jaw Chuck, kewara n'ime ntuziaka, electric, pneumatic, haịdrọlik atọ, dị ka ndị ahịa dị iche iche mkpa, ị nwere ike họrọ. Agbanye center na izugbe haịdrọlik Chuck ọzọ were, akwa ogo akpaaka. Adabara ogbe nhazi.
E jiri ya tụnyere lathes ndị a na-ejikarị eme ihe, CNC lathes na-ejikarị ụlọ elu ngwá ọrụ CNC eme ihe, kewara n'ime usoro kwụ ọtọ. E nwere ọdụ 4, ọdụ 8, na ọdụ 12 ịhọrọ. Stationslọ ọrụ ndị ọzọ, ọnụahịa dị elu. Candị ịnya ụgbọ ala dị iche iche nwere ike ekewa n'ime ụlọ elu hydraulic na ụlọ elu eletrik. Ke ofụri ofụri, electric mma ụlọ elu price bụ dịtụ ukwuu dị ọnụ ala karịa. Site na itinye mmemme n'ime sistemụ CNC, akara ngosipụta sistemụ CNC ka ọ bụrụ ụlọ ọkụ cutter, mgbanwe ngwa ọrụ akpaka. Akwa arụmọrụ.
Egwuregwu na ọdụdụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji dozie ihe ndị ahụ na-arụ ọrụ. Oche ọdụ nwere ọdụ ọdụ ọdụ aka, oche ọdụdụ hydraulic, oche ọdụ ikuku pneumatic.
Igwe mwepụ Chip: Mgbe a na-arụ ọrụ etiti ntụgharị, a ga-egbutu ihe mkpofu, nke dị mfe ịnakọta ruo ogologo oge. Enwere ike iji igwe mwepu mgbawa maka mwepụ mgbawa. A ga-ebuga ígwè a na-apị apịaji na nke ọzọ site na eriri igwe maka usoro dị n'otu.